U.S oo ka Digtay Weeraro ka dhan Safaaradaheeda
Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay Jimcihii in suurtagalnimada Qatarta argagixiso ay xooggantahay Bariga dhexe iyo Waqooyiga Africa, waxeyna u digtay muwaadiniinta Mareykanka ee dunida u kala safra.
Wasaaradu waxey sheegtay in laga yaabo weerar Alqacida ay ka soo maleegaan Gacanka Carbeed.
War ka soo baxay wasaaradda Arimaha dibadda ayaa intaasi ku daray in al-Qaida iyo ururada ay xulufada yihiin laga yaabo inay weeraro ka geystaan meelo dunida ka mid ah laga bilaabo waqtigan la joogo ilaa iyo dhamaadka bisha August.
Digniintan ayaa ku soo beegmeysa maalin ka dib markii Mareykanka uu sheegay inuu xirayo tira ka mid ah safaaradihiisa iyo Qunsuliyadihiisa dunida oo dhan maalinta Axadda ee soo socota sababo dhinaca amaanka ah.
Harun Macruf ayaa isugu keena soo duway wararka la xiriira digniinta mareykanka.
Dhageyso Warbixinta Digniinta Mareykanka